महासचिव शर्माको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले ‘भिजिट नेपाल’ विशेष समितिमा बस्न भट्ट असहमत | We Nepali
२०७६ फागुन ११ गते १६:२९
एनआरएनए पूर्व अध्यक्ष भवन भट्ट
लन्डन । ‘नेपाल भ्रमण बर्ष २०२०’ लाई सहयोग गर्न गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले बनाएको बिशेष समिति महासचिवका कारण संकटमा परेको छ ।
महासचिव डा. हेमराज शर्माले ‘भिजिट नेपाल २०२०’ विशेष समिति अध्यक्ष भवन भट्टको सहमति विपरीत आफ्ना आसेपासेलाई भर्ना गरेपछि संकट उत्पन्न भएको हो ।
महासचिव शर्माले हस्तक्षेप गरेपछि आफू विशेष समितिमा बस्न नसक्ने जनाउंदै भट्टले अध्यक्ष पदमा बस्न अस्वीकार गरेको इमेल कार्यसमितिमा पठाएका छन् । उनले महासचिव शर्माको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले पद अस्वीकार गरेको श्रोतले जनायो ।
एनआरएनए अध्यक्ष कुमार पन्तले ‘भिजिट नेपाल २०२०’ को शुभारम्भ गर्दा दशरथ रंगशालामा लाखौं विदेश पर्यटक भित्रयाउन सहयोग गर्ने आश्वासनसहितको भाषण गरेका थिए ।
नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरि यसै बर्ष सुरु भएको ‘भिजिट नेपाल २०२०’ मा सहयोग गर्न एनआरएनए आइसीसीले भवन भट्टको नेतृत्वमा विशेष समिति बनाएको घोषणा गरेको थियो । तर, हालै समितिमा सरकारलाई पर्यटक भित्र्याउन सहयोग गर्ने भन्दा आफ्ना आसेपासेलाई भर्ना गरिएपछि भट्ट विशेष समिति अध्यक्षमा बस्न हच्केका छन् ।
नेपाल सरकारले सन् २०२० सालमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना अघि सारेको छ । जसलाई एनआरएनएले सहकार्य गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
विशेष समितिको संरक्षकमा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई छन् । पूर्वअध्यक्ष भट्ट अध्यक्ष रहेको विशेष समिति सल्लाहकारमा डा. गणेश गुरुङ, दीपकराज जोशी, विश्वभर घिमिरे र अर्जुनकुमार श्रेष्ठ (आइसीसी उपाध्यक्ष) छन् । विशेष समिति संरक्षकसहित ३२ सदस्य छन् ।
यसैबीच, महासचिव शर्माले आफूले त्यस्तो कुनै हस्तक्षेप नगरेको र विधानतः नै काम गरेको जनाएका छन् । ‘भट्टजी के कारणले बस्न चाहनु भएन त्यो उहांकै इच्छा भयो तर मैले विधान बाहिर गएर कुनै काम गरेको छैन्’- उनले बताए ।